क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती माथि स्वयंसेवकद्धारा सामुहिक करणी, भिडियो खिचेर पैसाको बार्गेनिङ ! — SuchanaKendra.Com
क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती माथि स्वयंसेवकद्धारा सामुहिक करणी, भिडियो खिचेर पैसाको बार्गेनिङ !
कैलाली । भारतवाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकी एक युवतीको सामुहिक करणी भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी उक युवतीले आफु सामुहित करणीमा परेको बताएकी छन् । १२ दिन अघि भारतको बैंङ्ग्लोर आएर लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवतीले आफु माथि यस्तो घटना भएको बताएकी हुन् । उनले आफुलाई न्याय दिन माग गरेकी छन् ।
युवतीले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेपछि क्वारेन्टिनमा त’नाव उत्पन्न भएको छ । स्थानियले वडा कार्यालय तो’ड फो’ड गरेका छन् । युवतीले आफुलाई स्वयं सेवक बताउने युवाहरुले नै आफुमाथि यस्तो ह’र्कत गरेको बताएकी छन् । यस्तो घटना लुकाउन खोजेको भन्दै स्थानिय आ’क्रो’शित भएका छन् ।
एक जनाले त्यस्तो हर्कत गर्दागर्दै अर्को स्वयं सेवक त्यहाँ आएको र उनीसंग सहयोग माग्दा उल्टै ति अर्का ब्यक्ति पनि आफु माथि जाइलागेको युवतीको आ’रोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्टले घटनावारे जा’हेरी नपरेको भएपनि आफुहरुले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन् ।
उनले आफुमाथि त्यस्तो ह’र्कत गरेका उनीहरुले भिडियो पनि खिचेको बताएकी छन् । बारम्बार ढोकामा आएर ढोका खोल्नु भनेका ति युवाहरुलाई प्रहरी बोलाउने चे’ता’वनी दिदा पनि नमानेको उनको भनाई छ । बारम्बार बोलाए पछि के काम रहेछ भनेर बाहिर जाँदा आफु माथि त्यस्तो घटना भएको उनले बताइन् ।
उनी आफु विवाहित भएको र छोराछोरी समेत भएको बताएकी छन् । भिडियो खिच्ने युवाले आफुसंग पैसा मागेको उनको दावी छ । ‘पैसा नदिए भिडियो भा’इरल बनाइदिन्छु भनेर ध’म्की दिए, उनले भनेकी छन् ।